NguvaTrade: Rega Anotungamira Arongedze Yako Inotevera Kugadzwa! | Martech Zone
NguvaTrade: Rega Kutungamira Kuronga Kwako Kugadzwa Kugadzwa!
Mugovera, March 9, 2013 Mugovera, March 9, 2013 Douglas Karr
Ndichiri kuvava nezvekumedza Blackberry Tango uye nekuzoiuraya. Chakanga chiri chishandiso chakanakisa chandisina kukwanisa kutsiva… kusvika zvino. Ini zvakaitika kune saiti yanga ichishandisa Nguva yeTradeTrade Kuronga chimiro uye akawana tekinoroji iyo inofanirwa kugovana.
Mari diki diki yandiri kugadzira mairi Timetrade zvakakodzera kuti zviripo nekuti inobvisa iyo yekumberi uye yekutaurirana nevatengi vangu kana tarisiro pakutsvaga zuva uye nguva yekusangana. Iyo sisitimu inotora iko kushanda uye inosimbisa iyo neayo yekutanga package, zvakadaro, ichikubvumidza iwe kuisa Dzvanya Kuronga bhatani chairo pawebhusaiti yako! Ichi chinhu chakanakisa chinogona kuwedzera shanduko seTimeTrade manotsi pazasi:
Tarisiro inobata nekuronga pfupi yekufona yeruzivo kana yekutengesa rubatsiro vanokwanisa uye vakagadzirira kuita hurukuro yekutenga. Izvi zvinopfupisa iyo yekutengesa kutenderera nekusvetuka iyo "yepamusoro" yekutengesa fanera uye kuwana chaiko kushanda pamwe nekutengesa maitiro. NguvaTrade vatengi vanogara vachiona kuwedzera kwe25% kana kupfuura mukushandurwa-kusvika-kutengesa uye kupfupisa mahedheni ekutengesa ne40% kana kupfuura.
Saka tarisiro inogara pane yako saiti uye inofarira. Panzvimbo pekuendesa fomu rekukumbira, ivo vanodzvanya kuronga uye kuronga musangano wakasarudzika nenzira yakanangana nemunhu chaiye pachikwata chako. Zvakanaka sei izvozvo? Hapana kupokana, hapana mushe… yako karenda yakagadziridzwa, yako CRM yekutengesa yakagadziriswa, uye yako yekushambadzira yekushambadzira yekukurudzira mushandirapamwe zvino yarambidzwa. Zvese izvi zvinoitwa pasina chero munhu mukambani yako kusimudza munwe!
TimeTrade inosangana zvakananga neGoogle Calendar, Hubspot, Marketo, Eloqua uye Salesforce. Saka hazvingori chete kuti vatungamiriri vako vaiseta musangano, asi ruzivo rwavo muCRM yako kana yekushambadzira otomatiki chikuva yaizogadziridzwa futi!
Tags: tinya kurongatimetrade
Internet Explorer Zvichiri Pamusoro Bhurawuza rekuona Email
Nei Yako Inotengeswa Yekutengesa Sarudzo iri Kukundikana
Mar 10, 2013 pa 5: 33 AM
Ini ndinoda Nguva Yekutengesa, basa rakanaka.
Mar 18, 2013 pa 2: 29 PM
Hei Doug, ndatenda nekuongorora kunotyisa. Tiudze kana iwe kana chero munhu aine chero mibvunzo pane TimeTrade!
Gumiguru 8, 2014 pa 6:41 AM
Nguva Yekutengesa ine zvikanganiso zvakakomba sechigadzirwa uye kambani. Chikonzero chikuru nei vanhu vachida chigadzirwa chakadai ndechekufananidza - kuitira kuti vatengi vakwanise kuenda pawebhu, kuronga nguva, uye ndizvozvo. Yakazara sync haipo, zvisinei, zvirinani kune Calendar.app. Ini handikwanise kudzima maAccounts kubva kuKarenda uye voita kuti vadzime kubva kuTimeTrade. Ini ndinofanira kuenda KUNA TIMETRADE SITE kubata yangu pakarenda. Ndakanongedza kuti ichi hachisi "sync" - kuti "sync" zvinoreva "sync" asi handina rutsigiro. Pandakakumbira kudzoserwa chikamu sezvo ichi chaive chinhu chakashambadzwa, ndakaudzwa kuti chibvumirano hachibvumidzi kudzoserwa. Ndeipi mhando yekambani inopa vatengi mhinduro dzakadai? Ini ndichasiya TimeTrade kana gore rangu rapera. Usatenge ichi chigadzirwa.
Mbudzi 24, 2014 na9: 57 PM
Ichi chishandiso chakanyanya kuwanda kwechinhu chinobatsira-dandy asi chinobatsira uye chinoshanda panguva imwe chete. Nguva yekutengesa yakaita basa rakanaka mukugadzira izvi zvakanaka zvinhu. Hapanazve kunetseka pakurongwa kwekugadzwa. Iyi tambo inotaura zvese, "Saka havangotungamira zvako chete kuseta musangano, asi ruzivo rwavo muCRM yako kana yekushambadzira otomatiki chikuva yaizogadziridzwa futi!"